ဖူးနုသဈ: အပငျြးပွေ ခေါငျးစားဖို့ (၂)
မိုကျခရိုဆော့ဖျက အငျတာဗြူး အကွောငျး ရေးထားတဲ့ စာအုပျကလေး ဖတျကွညျ့ရငျး စိတျဝငျစားစရာ ကောငျးတဲ့ ပဟဠေိ ကလေးတှေ သှားတှပေ့ါတယျ။ အဲဒီ အထဲက အခြို့ကို အပငျြးပွေ ခေါငျးစားလို့ ရအောငျ ဝမြှေ ပေးလိုကျပါတယျ။
(၁) သငျ့မှာ ၅ ဂါလံ ခှကျ တဈခှကျနဲ့ ၃ ဂါလံ ခှကျ တဈခှကျ ရှိတယျ။ အဲဒီ ခှကျ ၂ ခှကျကို သုံးပွီး ရေ ၄ ဂါလံ အတိအကြ ရအောငျ ဘယျလို ခြိနျမလဲ။
(၂) သငျ့မှာ ဘိလိယကျ ဘောလုံး ၈ လုံး ရှိတယျ။ အဲဒီ အထဲက ဘိလိယကျ ဘောလုံးတဈလုံးက တခွား ဘိလိယကျ ဘောလုံးတှနေဲ့ ယှဉျရငျ နညျးနညျး ပိုလေးနတေယျ။ ခြိနျခှငျကို ၂ ခါပဲ သုံးပွီးတော့ အဲဒီအထဲက အလေးခြိနျ မတူတဲ့ ဘိလိယကျ ဘောလုံးကို ဘယျလို ရှာမလဲ။
(၃) သငျ့မှာ ဖနျပွှနျ ၅ ခုနဲ့ ဆေးလုံးတှေ ရှိနတေယျ။ ဖနျပွှနျတဈခုထဲက ဆေးလုံးတှေ အားလုံးက ပကျြစီးနတေယျ။ ပကျြစီးနတေဲ့ ဆေးလုံးတှကေ ၉ ဂရမျ ရှိပွီးတော့ ပုံမှနျ ဆေးလုံးတှကေ ၁၀ ဂရမျ ရှိတယျ။ ပေါငျခြိနျစကျကို တဈခါတညျး သုံးပွီးတော့ ပကျြစီးနတေဲ့ ဖနျပွှနျကို ဘယျလို ရှာမလဲ။
(၄) ပွိုလဲကတြော့မယျ့ တံတားတဈခုမှာ လူ ၄ ယောကျ ညမှောငျနတေဲ့ အခြိနျ ဖွတျကူးဖို့ ကွိုးစားနကွေတယျ။ အဲဒီ လူ ၄ ယောကျ တံတား ဟိုဖကျကမျး ဒီဖကျကမျး ကို ဖွတျကူးနိုငျတဲ့ အခြိနျက တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မတူကွဘူး။ တဈယောကျက ၁ မိနဈအတှငျး ဒီဘကျကမျးက ဟိုဘကျကမျးကို ဖွတျကူးနိုငျတယျ။ နောကျတဈယောကျက ၂ မိနဈ၊ နောကျတဈယောကျက ၅ မိနဈ၊ နောကျတဈယောကျက ၁၀ မိနဈ အတှငျးမှာ ဖွတျကူးနိုငျတယျ။ သူတို့ တံတားကို တဈခါ ဖွတျကူးရငျ နှဈယောကျစီပဲ တံတားက လကျခံနိုငျတယျ။ အဲဒီလို မဟုတျရငျ တံတားက ပွိုကသြှားမယျ။ နောကျပွီး တံတားကို ဖွတျကူးဖို့အတှကျ လကျနှိပျဓာတျမီး ရှိမှ ဖွဈမယျ။ မဟုတျရငျလညျး ရထေဲ ပွုတျကမြယျ။ လကျနှိပျဓာတျမီးက ၁ လကျပဲ ရှိတယျ။ တံတားက နောကျထပျ ၁၇ မိနဈ အကွာမှာ ပွိုကတြော့မယျ။ ဒီတံတားကို သူတို့ ၄ယောကျစလုံး ၁၇ မိနဈ အတှငျးမှာ ဘယျလို ဖွတျကူး ကွမလဲ။
(၅) သငျ့မှာ စနကျတံ ၂ ခု ရှိတယျ။ စနကျတံ တဈခုစီက အစအဆုံး လောငျကြှမျးဖို့ ၁ နာရီ တိတိ ကွာမယျ။ ဒါပမေယျ့ စနကျတံရဲ့ လောငျကြှမျးတဲ့နှုနျးက တသမတျတညျး မဟုတျဘူး။ အမွနျ လောငျကြှမျးတဲ့ အပိုငျး ရှိသလို အနှေး လောငျကြှမျးတဲ့ အပိုငျးလညျး ရှိတယျ။ သငျ့ကို စနကျတံတှေ မီးရှို့ဖို့ မီးခွဈတဈခု ပေးထားမယျ။ ၄၅ မိနဈ တိတိ အခြိနျကို စနကျတံ ၂ ခု သုံးပွီး ဘယျလို တိုငျးမလဲ။
(၆) သငျဟာ ဝနျထမျးတဈယောကျရဲ့ ၇ ရကျစာ လစာကို ရှတေုံးတှနေဲ့ ပေးရမယျ။ သငျ့မှာ ရှခြေောငျး ၁ ခြောငျး ရှိပွီး အဲဒီ ရှခြေောငျးမှာ ၇ ပိုငျးပိုငျးနိုငျဖို့ အတှကျ အမှတျ မှတျထားပွီးသား ဖွဈတယျ။ ဝနျထမျးက ၇ ရကျလုံး ပွီးမှ လစာ ပေးမယျ့ အစား တဈရကျပွီးတိုငျး သူ့ရဲ့ လစာနဲ့ ညီမြှတဲ့ ရှတေုံးကို ပေးဖို့ ပွောတယျ။ ၇ ရကျပွညျ့ရငျ ရှတှေေ အားလုံးကို ဘဏျက ငှနေဲ့ လဲလှယျပေးမယျ။ သငျ့ကို ရှခြေောငျးကို ဖွတျဖို့ နှဈခါပဲ ခှငျ့ပွုမယျ။ ဝနျထမျးရဲ့ လစာ ၇ ရကျစာ ကို ဘယျလို ပေးမလဲ။
(၇) အခနျးထဲမှာ စားပှဲတငျ မီးလုံး ၁ လုံး ရှိတယျ။ အခနျးရဲ့ အပွငျဖကျမှာ မီးခလုပျ ၃ ခု ရှိတယျ။ အဲဒီအထဲက မီးခလုပျ တဈခုက မီးလုံးကို အဖှငျ့အပိတျ လုပျလို့ ရတယျ။ သငျ အခနျးအပွငျဖကျက မီး အဖှငျ့ အပိတျ လုပျတဲ့ အခြိနျမှာ အခနျးထဲကို လှမျးမမွငျရဘူး။ သငျ့အနနေဲ့ အခနျးထဲကို တဈခါပဲ ဝငျပွီး စုံစမျးခှငျ့ ရှိတယျ။ ဘယျမီးခလုပျက မီးလုံးကို ထိနျးခြုပျတယျ ဆိုတာ ဘယျလို သိနိုငျမလဲ။
William Poundstone ရဲ့ How would you move Mount Fuji ထဲကပါ။
အခွား ဖတျရနျ။ အပငျြးပွေ ခေါငျးစားဖို့
Posted by ZT at 10:39 PM
၅ ဂါလံ ပုံးထဲကနေ ၃ ဂါလံ ပုံးထဲကို လောင်းထည့်လိုက်တော့ ၂ ဂါလံ ကျန်.. အဲ့လို ၂ခါခပ် ရင် ၄ ဂါလံ ရပါတယ်ရှင်
စာနဲ့ မရေးတတ်လို့ ပုံဆွဲသွားတာပါ..
၂ ပုံးထဲ ရှိတာလေ။ ပထမ တစ်ခါ လောင်းထည့်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ ၂ ဂါလံ ဘယ်နား သွားထားမလဲ။ ၃ ဂါလံ ပုံးထဲ ထည့်ထားရင်လည်း နောက်တစ်ခေါက် ထပ်လောင်းလို့ မရတော့ဘူး။ :P
၅ဂါလံပုံးထဲ တစ်ဝက်ခန့်တော့ ၂.၅ တခါပြီးပြီး
၃ဂါလံပုံးနဲ့ တစ်ထက်ခန့်တော့ ၁.၅ တခါပြီးပြီး
အဖြေက အဲဒါ မဟုတ်ဘူးဗျ။ အတိအကျ ချိန်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းရှိတယ်။ မှန်းထည့်ရင် ၄ ဂါလံ အတိအကျ ဘယ်ရမလဲ။
၂) ဘိလိယက်ဘောလုံး ၁ လုံးက အလေးချိန်မညီတာ ပိုနေတာလား လိုနေတာလား မသိတော့ခက်တယ်။
ဘောလုံး ၆ လုံးကို ၃ လုံးစီ ချိန်ခွင်ပေါ်တင်ကြည့်။ (၁ ခါ ချိန်ပြီး)
* ညီနေရင် ကျန်တဲ့ ၂ လုံး ထပ်ချိန်။ အဖြေထွက်မယ်။ (၂ ခါ ချိန်ပြီး)
* မညီရင် (လိုတဲ့ ပိုတဲ့) တဘက်က ၃ လုံးကနေ ၂ လုံး ထပ်ချိန်။ အဲဒီ ၂ လုံး မညီရင် (အလေးချိန် လိုတဲ့ ပိုတဲ့ ၁ လုံးက အဖြေပေါ့)။ (၂ ခါ ချိန်ပြီး)
အဲဒီ ၂ လုံး ညီရင် ကျန်တဲ့တလုံးက အလေးချိန် မတူတဲ့ဟာပေါ့။
အလေးချိန် မတူဘူး ဆိုတဲ့ တလုံးက လျှော့နေတာလား ပိုနေတာလား သိမှ အထက်က နည်းအတိုင်း ၂ ခါနဲ့ ရမှာ။ ပိုသလား လိုသလား မသိရင်တော့ ၂ ခါနဲ့ မရဘူး။
ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ဖတ်ကြည့်တာတော့ ရှင်းတာပဲ။ သူများ ဖတ်ရင်တော့ ရှင်းချင်မှ ရှင်းမှာ။ ကျန်တာတွေ ခဏနေမှ ဆက်စဉ်းစားမယ်။ မအားသေးလို့။
ပိုလေးနေတယ်လို့ ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ဘိလိယက်ဘောလုံး မေးခွန်း အဖြေက အဲဒါ မှန်ပါတယ်။
၃ဂါလံပုံး ထဲကရေကို ၅ဂါလံပုံးထဲ နှစ်ခါထည့်။ ၃ဂါလံပုံး ထဲမှာ ၁ဂါလံပဲကျန်မယ်။ ၅ဂါလံ ပုံးထဲကရေကိုသွန်ပြီးတော့ ၃ဂါလံထဲမှာကျန်တဲ့ ရေ ၁ဂါလံကိုထည့်မယ်။ နောက်ဆုံး ၃ဂါလံထဲကရေကို ၅ဂါလံပုံးထဲထပ် ထည့်ရင် ၄ ဂါလံ ရပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတခု မှာ ကြည့်ဖူးတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၄ ဂါလံ ရအောင် အဲဒီလို ချိန်တာပါ။
(၄) ၁ မိနစ်သမားနဲ့ ၂မိနစ်သမား အတူသွား၊ ၁မိနစ်သမားပြန်လာ၊ ၁မိနစ်သမားနဲ့ ၅မိနစ်သမား အတူထပ်သွား၊ ၁မိနစ်သမားထပ်ပြန်လာ၊ ၁မိနစ်သမားနဲ့ ၁၀မိနစ်သမား အတူသွား၊ အကုန်ဟိုဖက်ရောက်။ :P
(တကယ်တော့ အချိန်မလောက်ဖူး ၁မိနစ်သမား အပြန်မှာသုံးတဲ့ ၁မိနစ် ၂ ခါထည့်ပေါင်းရင် စုစုပေါင်း ၁၉မိနစ်ကြာတယ်၊ ၁၇မိနစ် မပြည့်ခင် ခုန်ကူးကြပေါ့ဗျာ နောက်ဆုံးနှစ်ယောက် .. :D)
ရွှေချောင်းကို ၇ ပိုင်းဖြတ်စရာ အရာပေးထားတယ်ဆိုတော့၊ အိမ်း .. ၂ခါထဲလဲဖြတ်ရမယ်ဆိုတော့။ ၁) ၁ ရက်စာ တစ်ဖြတ် ၂) ၂ရက်စာ တစ်ဖြတ် (၂ပိုင်းတစ်တွဲ) အဲဂလိုဖြတ်ပါမယ်။
ပထမရက်အတွက် လစာအဖြစ် ၁ရက်စာ အတုံးပေးမယ်၊ နောက်နေ့လစာထုတ်မယ့်ရက်မှာ အဲဒီအတုံးပြန်ယူခဲ့ဖို့ပြောလိုက်မယ်၊
ဒုတိယနေ့လစာကို ၂ပိုင်းတွဲကိုပေးလိ်ုက်ပြီးတော့ ပထမနေ့က ပေးထားတဲ့ ၁ပိုင်းပြန်တောင်းမယ်
တတိယနေ့လစာကို ဒုတိယနေ့က ပြန်တောင်းထားတဲ့ ၁ပိုင်းကိုလစာအဖြစ်ပေးမယ်။
စတုတ္ထနေ့ကို လစာအဖြစ် လေးပိုင်းတွဲကြီးကိုပေးမှာဖြစ်ပြီး ရှေ့သုံးရက်က ပေးထားတဲ့ သုံးပိုင်းကို (၂ပိုင်းတွဲတစ်ခု၊ ၁ပိုင်းတစ်ခု) ပြန်တောင်းမယ်၊
ငါးရက်မြောက်နေ့မှာ တစ်ပိုင်းထဲဟာ ထပ်ပေးလိုက်မယ်
ခြောက်ရက်မြောက်နေ့မှာ လက်ထဲကျန်တဲ့ ၂ပိုင်းတွဲကို ပေးမှာဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားဆီက တစ်ပိုင်းဖြတ်ကို ပြန်တောင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်၊
နောက်ဆုံး ၇ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ နောက်ဆုံး လက်ကျန် တစ်ပိုင်းကို ပေးလိုက်ပါမယ်။ (မောထှာ)
ပထမအခေါက်= ၁မိနစ်နဲ့ ၂ မိနစ်အတူသွား၊ ၁ မိနစ်သမားပြန်လာ (၃မိနစ်)
ဒုတိယခေါက် = ၅မိနစ်သမားနဲ့ ၁၀မိနစ်သမားတူတူသွား၊ ဟိုဖက်ရောက်နေတဲ့ ၂မိနစ်သမား ပြန်လာ (၁၂မိနစ်၊ စုစုပေါင်းကြာချိန် ၁၅မိနစ်)
တတိယခေါက် = ၁ မိနစ်သမားနဲ့ ၂မိနစ်သမား၊ စကားမပြောဘဲ ရင်တမမနဲ့ အမြန်ပြန်လာ (၂မိနစ်ကြာ)
ကိုဒီဘီက ဆရာပဲ။ :D ကျွန်တော် တံတားဖြတ်တာကို စဉ်းစားတာ ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို့ မရဘူး။
မီးလုံးပြဿနာ ဂလိုအဖြေရှာကြည့်မယ် ..
ပထမခလုပ်ကိုဖွင့် ပြန်မပိတ်သေးဘဲ ခပ်ကြာကြာလေးစောင့်လိုက်၊ မီးလုံးပူလာနိုင်လောက်တဲ့ အချိန်ပမာဏလောက်ပေါ့၊ နောက်ခလုပ်ပြန်ပိတ်၊ ဒုတိယ ခလုပ်ကိုဖွင့် ပြီးတာနဲ့ အခန်းထဲဝင်ကြည့်ပေတော့။
အဲဒီမှာ မီးလင်းနေရင် ဒုတိယခလုပ်ဟာ အမှန်၊ မီးတော့မလင်းဘူး၊ ဒါပေမယ့် မီးလုံးက ပူနေမယ်ဆိုရင် ပထမခလုပ်က အမှန်၊ မီးလဲမလင်းဘူး၊ မီးလုံးကလဲ ပူမနေဘူးဆိုရင်တော့ တတိယခလုပ်ဟာ အမှန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ အလကားစားလို့ရတဲ့ ကူပွန်လက်မှတ်ပေးပါတော့။ :D
ဒါလည်း မှန်ပါတယ်။ ဘီယာတောင် တိုက်သင့်နေပြီ။ Facebook ပေါ်တက် သီချင်းတွေ တစ်ပုဒ်ပြီး တစ်ပုဒ် ဆိုနေမှာ စိုးလို့။ :D ဆေးလုံး ပြသနာက မခက်ဘူး။ စနက်တံကတော့ နည်းနည်း စားတယ်။
၄ ခု ရှင်းသွားပြီပေါ့။ ကောင်းလိုက်တာ။ နောက် ၂ ခု လာရှင်းကြမှာ ဆက်စောင့်လိုက်ဦးမယ်။ =D
ကိုကိုဒီဘီ တယောက်တည်း ၃ ခု ရှင်းတယ် တော်လိုက်တာ... ဒါမှ ec
နံပါတ် ၂ တောင် အဲလို ဆင်ဆင် ပြဿနာမျိုးတွေ ဖတ်ဖူးလို့ ဖြေနိုင်တာ။ သတိရသလောက်တော့ ဖတ်ဖူးတာမှာ ၂ ခါတည်းလို့ ကန့်သတ်တာ မပါဘူး ထင်တာပဲ။
မနေ့ညက သောက်လိုက်လို့ ပွင့်ထွက်ကုန်တာလား မသိဘူးနော် ... တိန်!
ကြိုး၁ချောင်းကို မီးရှို့မယ်ဆို ၁ နာရီကြာတယ်ဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး ပထမကြိုးရဲ့ ဟိုဖက်ဒီဖက် အစနှစ်ဖက်ကို တစ်ပြိုင်နက် မီးရှို့မယ်။ ဒုတိယကြိုးကိုတော့ အစတစ်ဖက်တည်းကိုသာ မီးရှို့မယ်။(assumption ကြိုးသုံးစ လုံး တပြိုင်နက် ရှို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆလိုက်ပါ။)
ကြိုးတစ်ချောင်း မီးအကုန်လောင်သွားဖို့ ၁ နာရီကြာတယ်ဆိုတော့ အစနှစ်ဖက်က ပြိုင်တူရှို့လိုက်တဲ့ကြိုးက မီးအကုန်လောင်သွားဖို့ နာရီဝက်ကြာမှာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒုတိယကြိုးကလဲ နေရာတစ်ခုအထိ မီးလောင်ပြီးသွားပါပြီ။ သူလဲ နာရီဝက်ကြာသွားပြီပေါ့။ နောက်ထပ်ကျန်နေသေးတဲ့ အပိုင်းထပ်လောင်သွားဖို့ နာရီဝက်ကြာဦးမှာပါ။ (ကြိုးအကုန်လောင်ဖို့ ၁နာရီကြာတယ်ဆိုလို့ပါ)အဲဒီအချိန်မှာ ဒုတိယကြိုးရဲ့ အခြားအစွန်းတစ်ဖက်ကနေ မီးထပ်ရှို့လိုက်ပါ (ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုZT ကိုပါရှို့လိုက်သင့်ပါတယ်)။
အဲသာဆိုရင် နာရီဝက်စာကျန်တဲ့ အပိုင်းကို ပြိုင်တူမီးရှို့သလိုဖြစ်ပြီးတော့ ၁၅မိနစ်အကြာမှာ ကြိုးအကုန်လောင်သွားမှာပါ။ အဲဒါဆိုရင် ၄၅မိနစ် အချိန်ရပါပြီ။ :)
ံHardest Puzzle တွေထဲက မီးလုံးနဲ့ စနက်တံ ၂ ပုဒ်ပဲ ပါသေးတယ်။ နောက် ၄ ပုဒ် ကျန်သေးတယ်။ ထပ်ဖြေဦးမလား။ :D
ဒါနဲ့ ကိုဒီဘီ Out of Box အတော် တွေးနိုင်တာပဲ။
အင် ... နက်ဖြန်ရုံးတက်ရဦးမှာ စောစောအိပ်ပါရစေ ..ဟီး
မောင်ကြီးကို ပညာစမ်းမလို့ :P
အဖြေတွေ ထိုင်ဖတ်တာတောင်နားလည်အောင်အတော်စဉ်းစားရတယ်။ ရိတာနဲ့ ရေဂါလံနစ်ခုဘဲနားလည်တယ်။ ကိုကိုဒီဘီ အဖြေကိုဖတ်တာတောင်စဉ်းစားလို့လိုက်မမှီဘူး. နားမလည်ဘူး. အဲဒါဆိုရင် တို့ဘရီန်းက အတော်ညံ့သလားဟင်။
တို့ဝသလားဟင် လို့မိန်းမတစ်ယောက်က မေးပြီဆိုရင်ဝနေပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပါတဲ့။ အဲသာဆိုတော့ဘရိန်းည့သလားဟင်ဆိုရင် ညံ့နေပြီသာမှတ်လိုက်ပါတော့။
ရေအဖြေကို လုံးလုံး မရှင်းဘူးဗျာ....သုံးဂါလံပုံးထဲက ရေကို ငါးဂါလံပုံးထဲကို ဘယ်လို နှစ်ခါခွဲထည့်မှာလည်း အဲဒါကို နားမလည်ဘူး
၃ ဂါလံပုံးနဲ့ခပ်။ ၅ ဂါလံပုံးထဲထည့်။ ၅ ဂါလံပုံးထဲ ၃ ဂါလံ ဝင်သွားမယ်။
နောက်တစ်ခေါက် ၃ ဂါလံပုံးနဲ့ခပ်။ ၅ ဂါလံပုံးထဲ ထပ်ထည့်။ ၂ ဂါလံ ထည့်ပြီးရင် ၅ ဂါလံပုံး ပြည့်သွားပြီ။ ၃ ဂါလံ ပုံးထဲမှာ ၁ ဂါလံ ကျန်မယ်။
၅ ဂါလံ ပုံးထဲက ရေအားလုံးကို သွန်ပစ်လိုက်။ ပြီးရင် ၃ ဂါလံပုံးထဲက ရေ ၁ ဂါလံကို ၅ ဂါလံပုံးထဲ ပြောင်းထည့်။ ၅ ဂါလံ ပုံးထဲမှာ ၁ ဂါလံ ကျန်မယ်။
နောက်ထပ် ၃ ဂါလံ ပုံးနဲ့ ထပ်ခပ်။ ၅ ဂါလံ ပုံးထဲ အကုန် သွန်ထည့်။ အဲဒါဆို ၅ ဂါလံ ပုံးထဲမှာ ၄ ဂါလံ အတိ ရမယ်။
ပထမ ၃ ဂါလံတခါထည့်တာလေ..နောက် ၃ ဂါလံချိန်ပြီးထပ်ထည့်တော့ အကုန်မဝင်ပဲ...၁ ဂါလံကျန်
၅ ဂါလံ ပုံးထဲကရေတွေ အကုန်သွန်
ခုန ၃ဂါလံ ပုံးက ကျန်နေတဲ့ ၁ ဂါလံထည့် + နောက်တခါ ၃ ဂါလံထပ်ထည့် = ၄ ဂါလံ
(သူများဖြေထားတာကို ဝင်ရှုပ်သွားပါသည် :)
aww, sorry :P
Haha. It's OK. Justacoincidence. :D
၅ ဂါလံ ပုံးနဲ့ အပြည့်ခပ်၊
၃ ဂါလံ ပုံးထဲ ခွဲထည့်လိုက်ရင် ၂ ဂါလံ ကျန်။
၃ ဂါလံ ပုံးထဲက ရေကို သွန်။
၅ ဂါလံ ပုံးထဲ ကျန်နေတဲ့ ၂ ဂါလံ ကို ၃ ဂါလံ ပုံးထဲ သွားထား။
၂ ဂါလံ ဝင်ပြီးသား ၃ ဂါလံ ပုံးထဲကို သွားဖြည့်၊
၅ ဂါလံ ပုံးထဲမှာ ၄ ဂါလံ ကျန်ပါမည်
2nd comment မှာ မီးရှို့သွားတာ နားမလည်ကြပုံပေါ်တယ် :D
အင်း။ ဒီလိုလည်း ရသားပဲ။ :)
၅ ဂါလံ ပုံးကြီး ၂ခါ မ,ရတာ ခါးတော့နာမှာပဲ :D
ဖန်ပြွန်တွေကို တစ်ခုချင်းတင်ပြီး အလေးချိန်ကို ကြည့်မယ်။
ဆယ်ဂဏန်း တွေ ကျနေသေးရင် မပျက်စီးသေးလို့ ယူဆပြီး ကိုးဂဏန်းနဲ့ ဆုံးတဲ့အလေးချိန်ကို ပြနေရင် အဲဒီဖန်ပြွန်က ပျက်စီးနေတဲ့ ဆေးလုံးပါတဲ့ ဖန်ပြွန်ဖြစ်မယ်။
(ဝင်ရှုပ်သွားတယ်။ :P )
တစ်ခါတည်း ချိန်ရမှာလေ ကိုဘ။ :D
သုံးချောင်းတင်မယ်။ ဆယ်ဂဏန်းကျနေရင် ကျန်တဲ့ နှစ်ချောင်းထဲက တစ်ချောင်းက ပျက်စီးနေတဲ့ ဆေးလုံးပါတဲ့ ဖန်ပြွန်ပဲ..
(ကိုယ်ကတော့ ခပ်တည်တည်ပဲ ခုထိ မလျှော့သေးဘူး။ အီးစီလေ သိတယ် မဟုတ်လား :smile: )
ကိုဘ အဖြေ အပေါ်တခုက မမှန်ဘူးလား။
တချောင်းစီကို ပြန်မချဘဲ တချောင်းချင်း တင်သွားမှာလေ။ ဒီတော့ စက်ကို တခါပဲသုံးတာပေါ့။
မမှန်ဘူး။ တစ်ခါတည်းနဲ့ ချိန်ပြီး သိအောင် လုပ်ရမှာ။ :D ကိုဒီဘီလို နည်းနည်းလေး Out of Box တွေးကြည့်ပါ။ သိပ်မခက်ပါဘူး။ :P
၅ခုလုံးတင်ချိန်ပီးတော့ တစ်ချောင်းစီနုတ်ကြည့်ပေါ့ ဟိဟိ
တစ်ခါတည်း ချိန်ရမှာပါဆို မိဗျစ်... :anr:
ဆေးလုံးတွေကိုထုတ်ချိန်ပေါ့ ရလား။ ရရင်တော့
ပထမပြွန်က ဆေးလုံး ၁ လုံး ၊ဒုတိယက ၂ တတိယက ၃ ၊ စတုထ က ၄ လုံး၊ နံပါတ် ၅ က ၅ လုံးထည့်ချိန် ( ပုံမှန် မပျက်စီးရင်
၁၀+ ၂၀ + ၃၀ +၄၀ + ၅၀ = ၁၅၀ ဂရမ် ရရမယ်ပေါ့။
တကယ်လို့၁၄၈ ပဲရတယ်ဆို နံပါတ် ၂ ပြွန်က ဆေးလုံးများပျက်စီးနေတယ်ပေါ့ ။ ၁၄၆ ဆို နံပါတ် ၄ ပေါ့။၁၄၉ ဆို ပထမပြွန်ပေါ့ ။ဟုတ်သလားဟင်။ဟိ။
ဒါဆိုရင် ညီမလေး အဖြေ မှန်ပါတယ်ကွယ်။ :P
သူရို့က အကုန်ဖြေ ပြီးနေပြီ။
တော်လိုက် ကြတာ.... မိုက်တယ်...
ရွှေဒင်္ဂါး ၁၂ြ­ပား၊ ၁ြ­ပားအတု၊ ချိန်ခွင်ကို၃ခါသုံြး­ပီး အတုရွေးပေးပါ။ အတုသည် ပေါ့နိုင်သလို လေးနိုင်သည်။